Mahafoy Izay TIA : M I T I A | FKMP
Mahafoy Izay TIA : M I T I A
« Ndeha hiova làlana! »
« Sambatra ny tia fihavanana, fa hantsoina hoe zanak’Andriamanitra izy » (Mt 5, 9)
Ny asa fikatrohana ho an’ny fanitarana ny fanjakan’Andriamanitra dia mitaky fandinihan-tena lalandàva. Natomboka tamin’ny matsompanahy ho an’ireo mpandrindra sy mpanabe ary tompon’andraikitra rehetra ny taom-pikatrohana eto amin’ny fiangonantsika ny alahdy 11 septambra 2016 lasa teo.
Ny asan’andriamanitra dia maro sampana. Nomeny talenta maro (1 Kor. 12, 4-7) koa ny FKMP hanefa ny iraka: hifankatia sy hampita ny FITIAVANA amin’ny hafa. Maro ny sedra sy dingana efa nodiavintsika tao anatin’izay 63 taona latsaka kely izay. Nisy ny nafaitra, nisy ny mamy! Ny mbola mampijoro dia ny fahasoavana sesehena avy amin’Andriamanitra. Misarika ny tompon’Andraikitra rehetra ho mendrika ny asa atolony azy ireo i Jesoa manao hoe: izay tianareo hatao aminareo dia ataovy amin’ny hafa koa. Tsara ny miteny sy mikabary fa mahomby lavitra ny finoana arahin’asa. Izay ataon’ny ray aman-dreny no ianaran’ny ankizy ary izay ataon’ny mpitondra no ohatra ho an’ireo entina.
Misy ny tsara tokony ho tohizana: ny asa natao rehetra dia noezahina hamaly ny fenitra telo: Mankalaza (célébrer), manompo (servir) ary mizara (partager). Tsikaritra ny fiombonantsika tao anatin’ny hetsika faha 60 taona, hetsika Pelerinazy (JMJ, Mont Saint Michel, Frat, Israely, …) sy ny maro hafa. Tsy mijanona hatreo anefa izany fa ny fiainantsika andavanandro mihitsy no Pelerinazy mizotra mankany amin’ ny fahamasinana sy Fitiavana. Misy ihany koa ny madilana. Mila mitaiza sy mandalina ny finoana mandrakariva isika ary mila miezaka isan’andro vaky mandravina ny tsy fitovian-kevitra ao anaty firahalahiana sy fitiavana.
Filamatra iainantsika ity taona pastoraly vaovao ity ny hoe MITIA (Mahafoy Izay TIA). Ezaka lehibe io. Ny fitiavana mantsy tsy maniry na mitombo ho azy. Mila volena sy karakaraina izy. Rehefa mamboly dia mila avaina sy omena zezika ary tondrahina. Arovana ny marefo tsy ho donainan’ny masoandro. Asiana tsatokazo ireo mitombo hahitsy fijoro. Hajaina ireo nanome voa ndrao maty maso any aoriana. Ny kristianina rehetra no vatany miara mizaka sy mampijoro ny hazo. Ny raviny dia ireo Vaomiera sy sampana maro miaritra ny masoandro sy ny orana mba hampiaina ny rehetra. Vokatr’izany rehetra izany dia hamoa tsara ny Fiangonana. Ny voankazo no ilay fitiavana zaraina amin’ ny hafa. Fa hangozohozo ireo rehetra ireo raha tsy miorim-paka ao amin’i Kristy isika. Ny kristianina dia nantsoina hitia. Manentana antsika ary ka ny FITIA resahina, ny tsiky zaraina, ny hafaliana atosaka, ny tarehy masin’i Jesoa banjinina, ny hamoram-po masahina, ny tantaran’ny famonjena toriana ary ny lalam-pitiavana no aoka hizorana.
Ny làlan-dririnina mantsy mamitaka fa ny MITIA tsy manodòka. Koa andeha ary isika hiova làlana ka hihila hananika ny tendrombohitry ny fitiavana. Hoy isika hoe sarotra izany? Niteny ny anjely Gabriely raha niarahaba an’i Maria: « … Tsy misy tsy hain’Andriamanitra tsy hatao ». Alao hery ary.
Mirary taom-pikatrohana feno fahasoavana ary Fiangonana feno kristianina MITIA.
Mpandrindra ny FKMP
Previous Post: Zoma 16/09/2016 (Lk 8,1-3)
Next Post: Sabotsy 17/09/2016 (Lk 8,4-13)